बच्चालाई गाईको दूध सेवन: भ्रम र यथार्थ :: डा राजकुमार बिक :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
बच्चालाई गाईको दूध सेवन: भ्रम र यथार्थ
डा राजकुमार बिक सोमबार, जेठ २३, २०७९, ०६:५९:००
आज भन्दा करिब १ महिना अगाडि कान्ति बाल अस्पतालमै कार्यरत एक जना सिस्टरले डाक्टर मेरो साथीको सानो छोरीलाई गाईको दूध दियो कि पखाला चलिहाल्छ, के गर्नु पर्ला? भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्को १५ दिन लगत्तै एक परिवार आफ्नो ८ महिने बच्चा लिएर ओपिडी आएर भन्दै हुनुहुन्थ्यो 'डा'साब हाम्रो बच्चालाई केही दिनदेखि गाईको दूध दिन लागेको बाबुले दिसा पातलो गर्ने, दिसामा रगत देखिने, अनि बान्ता पनि गरिरहन्छ।'
मैले 'कम्तिमा १-२ वर्षसम्म गाईको दूध प्रयोग नगर्दा हुन्थ्यो। किन त्यसो गर्नु भएको?' भन्दा आमाले श्रीमान् तिर हेर्दै 'मैले नखुवाउनुस भनेकै त हो नि घरमा हजुरबुवा हजुरआमाले राम्रो हुन्छ भन्दै खुवाइ दिनु हुन्छ' भनिन्।
हो, हामीले हेर्ने बिरामीहरुको थुप्रै अवस्थामा पुरानो सोच र अज्ञानताले गर्दा अझैं पनि कतिपए बच्चाहरुलाई आमाबुवाले गाईको दूध खुवाइराख्ने गर्नुहुन्छ। यो लेखमा माथिको परिवारजस्तैलाई समर्पित गर्दै सानो उमेरमा बच्चाहरुलाई गाईको दूध सेवनले देखिने समस्याबारे जानकारी दिने प्रयास गरेको छु।
संसारमा ५ वर्ष मुनीका बालबालिकामा सबैभन्दा बढी हुने खाद्य पदार्थको एलर्जीमा गाईको दूध सेवन मुख्य कारण हो। यो समस्या मुख्य गरेर गाईको दूधमा पाइने प्रोटिनले गर्दा हुने गरेको पाइएको छ। विभिन्न अध्य्यन (DRACMA, ESPGHAN, AAP and National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Guidelines) ले निकालेको तथ्यांक अनुसार बच्चाहरुमा करिब करिब २ देखि ५ प्रतिशतमा यो समस्या देखिने गरेको छ।
लगभग ५० प्रतिशत बच्चाहरुलाई १ वर्षको उमेरसम्म, करिब ७५ प्रतिशत बच्चाहरुमा ३ वर्षको उमेर सम्ममा र ६ वर्षको उमेर सम्ममा ९० प्रतिशतमा समस्याहरु कम भईसक्छ। यसमा दुई किसिमको असर देखिन्छ। एउटा तुरुन्तै देखिने जुन केहि मिनेटदेखि घण्टाभित्र देखिन्छ भने अर्को असर केहि दिनपछि विस्तारै देखिने गर्दछ।
• वान्ता तथा पखाला हुने
• दिसामा रगत देखिने
• खान मन नगर्ने, खाना सर्काउने, खाने बित्तिकै हुलुक हुलुक निकाल्ने
• छालामा डाबर आउने, रुघाखोकी लाग्ने, दमको समस्या देखिने, शरीर चिलाउने, ओठ सुनिने
• तारन्तर रोइराख्ने, पेट दुख्ने (कोलिक हुने), रक्तअल्पता हुने, आइरनको कमी हुने, कब्जियत हुने, उमेर अनुसारको तौल नबढ्ने, कहिलेकाही एकदम जटिल असरमा श्वास फेर्न गार्हो हुने, हात खुट्टा लुलो हुनेदेखी तुरन्तै ज्यान जाने पनि हुन सक्छ।
त्यसैले सुरुवाती समयमा गाईको दूध सेवन नगराउनु नै उत्तम उपाय हो भने गाईको दूध प्रयोग गर्नै नमिल्ने अवस्थामा के-के गर्न सकिन्छ भनी बुझ्न नजिकैका बाल चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्दछ।